Tag: avhareji yepedyo rate | Martech Zone
Tag: avhareji padyo padyo
Muvhuro, October 21, 2013 Muvhuro, October 21, 2013 Douglas Karr
Ipi muzana yevatengesi vanhu, paavhareji, vanoshaya mugove wavo? Ndeipi avhareji yepedyo rate? Zvakanakisa zvakadii izvo zvakanakisa zvekutengesa reps zvainoita zvichienzaniswa neavhareji? Ipi muzana muzana yevatengesi vanonyatsonzwisisa kurwadziwa kwevatengi vavo? Ipi muzana yevamiriri vevatengesi vanonzwa iyo pombi iri chaiyo? Mukubatana neSalesforce Work.com, iyi infographic kubva kuTAS Boka inopa zvidimbu gumi zvekufungisisa kwedata pakutengesa kuita. Kunyangwe iwe uchiona sechinhu chinotyisa, kana